21 Akyiri yi, Dawid kɔɔ ɔsɔfo Ahimelek nkyɛn wɔ Nob.+ Bere a Ahimelek+ huu Dawid no, ne ho popoe, na obisaa no sɛ: “Dɛn nti na wo nkutoo nam na obiara nka wo ho yi?”+ 2 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ ɔsɔfo Ahimelek sɛ: “Ɔhene na wasoma me asɛm bi ho,+ na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Mma obiara nnhu nea enti a meresoma wo ne ɛho ahyɛde a mede ama wo no ho hwee.’ Na me ne mmerante no ahyehyɛ sɛ yebehyia wɔ baabi. 3 Na afei, sɛ wowɔ paanoo anum anaa biribi foforo biara a, mesrɛ wo fa ma me.”+ 4 Nanso ɔsɔfo no buaa Dawid sɛ: “Minni paanoo hunu biara me nsam, gye paanoo kronkron+ no, sɛ mmerante no atwe wɔn ho afi mmea ho nko ara de a.”+ 5 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ ɔsɔfo no sɛ: “Yɛnkɔɔ mmea ho te sɛ kan a mekɔɔ ɔsa no ara;+ ɔkwan hunu a yetui no mpo ná mmerante no ade ho tew, na nnɛ a ɛsɛ sɛ wɔn ade ho tew yi na ɛremma saa?” 6 Ɛnna ɔsɔfo no de ade kronkron+ no maa no, efisɛ na paanoo biara nni hɔ sɛ paanoo a wɔayi afi Yehowa anim no;+ da a wɔde yi no, woyiyii na wɔde paanoo a wɔatõ no foforo guu hɔ. 7 Saa da no, na Saul nkoa no mu biako a wɔasianka+ no Yehowa anim wɔ hɔ; ná ne din de Doeg,+ Edomni+ a ɔyɛ Saul nguanhwɛfo so panyin no.+ 8 Na Dawid san bisaa Ahimelek sɛ: “Wunni biribiara te sɛ peaw anaa nkrante wɔ ha? Mamfa me nkrante ne m’akode ankura, efisɛ na ehia sɛ midi ɔhene asɛm no ho dwuma ntɛm.” 9 Ɛnna ɔsɔfo no kae sɛ: “Filistini Goliat+ a wukum no wɔ Ela asasetaw+ so no nkrante no ni—ɛno na wɔde ntama akyekyere ho wɔ asɔfotade+ no akyi no. Sɛ ɛno na wopɛ a, fa, efisɛ foforo biara nni hɔ sɛ ɛno.” Na Dawid nso kae sɛ: “Ɛso bi nni hɔ. Fa ma me.” 10 Na Saul nti, Dawid sɔre toaa so guanee+ saa da no, na okoduu Gat+ hene Akis nkyɛn. 11 Na Akis nkoa ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛnyɛ Dawid, asase no so hene+ no ni? Ɛnyɛ oyi na wɔde asaw bɔ gyee no so+ sɛ, ‘Saul akum n’apem, Na Dawid akum ne pedu’+ no?” 12 Na Dawid de nsɛm yi siee ne koma mu, na Gat hene Akis nti, osuroe+ pii. 13 Enti ɔyɛɛ ne ho sɛ ɔbɔdamfo+ wɔn anim+ dii abɔdansɛm wɔn nsam, na ɔsensan kurow apon no ho, na ɔmaa ne ntasu sian faa ne bogyesɛ mu. 14 Ɛnna Akis ka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ: “Hwɛ, moahu sɛ ɔbarima yi abɔ dam, na dɛn nti na mode no abrɛ me? 15 Adɛn, mihia abɔdamfo nti na mode oyi abrɛ me sɛ ɔmmɛyɛ abɔdansɛm nkyerɛ me yi? Oyi nso mmra me fie anaa?”